जीवन – Page5– Health Post Nepal
२०७७ माघ ४ गते | Sunday, 17 Jan, 2021
वैज्ञानिकले खोजे अस्वस्थकर सेतो नुनको स्वस्थकर विकल्प, स्वादमा गर्नुपर्दैन सम्झौता
सेतो नुन (सोडियम क्लोराइड) स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । नुनको अधिक सेवनले उच्च रक्तचाप, मोटोपनलगायत अनेक किसिमका रोग निम्त्याउँछ । तर, संसारभरि नै खानामा नुनको प्रयोग युगौँदेखि अनवरत कायमै छ । मानव जिब्रोका लागि सम्भवतः सबैभन्दा अभ्यस्त र नभई...
सावधान ! एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगले निम्तिन सक्छन् यस्ता गम्भीर समस्या
विश्व स्वास्थ्य संगठनले १८ वर्षसम्म उमेर समूहका व्यक्तिलाई बालबालिकाको सूचीमा राखेको छ । तर, कान्ति बाल अस्पतालमा भने १४ वर्षसम्मका बालबालिकाको मात्र उपचार गर्ने गरिएको छ । जन्मेदेखि नै उसले पाउने पोषकतत्वले बच्चाको वृद्धि–विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।...
सामान्यतया गर्भावस्थामा पनि अन्य समयजस्तै खानेकुरा खाने गरिन्छ । तर, गर्भावस्थामा अन्य समयमा भन्दा केही बढी पोषणको आवश्यकता पर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा भन्दा केही बढी खानेकुराको आवश्यकता पर्छ । विशेषगरी शरीरलाई सुरक्षा दिने खानेकुराहरू, हरियो सागपात, पहेँलो तथा रातो...
पीरोसित डराउनुहुन्छ ? जान्नुहोस्, खुर्सानीका १२ अपत्यारिला स्वास्थ्य फाइदा
पीरो भनेपछि हामीमध्ये कतिको ज्यान सिरिंङ हुन्छ भने कतिपयको मुख रसाएर आउँछ । खुर्सानी भनेपछि सुन्नै नचाहने र खुर्सानीका पारखी दुवैलाई हरियो खुर्सानीका अद्भुत स्वास्थ्यलाभबारे थाहा नहुन सक्छ । एसियनहरूको भान्छामा विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरिने हरियो खुर्सानी स्वास्थ्यका हिसाबले...
पहाडी क्षेत्रमा साउने संक्रान्तिमा गरिने विशेष पूजामा प्रयोग गरिने वनस्पति कुरिलोलाई औषधि एवम् पोषणयुक्त खाद्यान्नका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कमैलाई थाहा होला । आयुर्वेदका अनुसार अम्लपित्त, मस्तिष्क दुर्बलता, पिसाब पोल्ने, महिलामा हुने बढी रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप र...
सुत्केरी स्याहार भन्नाले विशेषगरी बच्चा जन्मेको ६ हप्तासम्मलाई बुझिन्छ । यो एक परिवारका लागि र एउटी आमाका लागि खुसीको क्षण त हुँदै हो, ९ महिनासम्म आफ्नो गर्भमा बच्चा हुर्काएर जन्म दिने आमाले समायोजन हुनुपर्ने र उपचारका साथै स्याहार पाउनुपर्ने...
बडी बनाउन तपाईं के चाहिँ गर्नुहुन्न । अनेक किसिमका खानेकुरा खानुहुन्छ । शारीरिक अभ्यास गर्नुहुन्छ । अझ आजकाल बजारमा मांसपेशी बनाउने र तौल बढाउने विभिन्न खालका प्रोटिन पाउडर पाइन्छन् । तर यसमा कयौं प्रकारका हानिकारक तत्व र रसायन प्रयोग...
किन विश्वभरि नै पुरुषभन्दा महिला धेरै बाँच्छन् ?
विश्वभरि नै पुरुषभन्दा महिला धेरै बाँच्छन् । तर, धनी राष्ट्रको इतिहास हेर्यो भने १९औँ शताब्दीमा यस्तो हुँदैनथ्यो । किन आजको युगमा महिलाभन्दा पुरुष बढी बाँच्छन् त ? र, किन यो समयक्रमसँगै बढिरहेको छ ? घटनाहरू असीमित छन्, तर हामीसँग...
स्वादका लागि होइन, शरीरका लागि प्रिय खाना रोज्नुहोस्, जुन शरीरअनुसार फरक हुन्छन्
पोषणविद् आफैँमा विवादित छन् । प्रायः मानिस पोषणबारे एउटै तथ्यमा सहमत हुँदैनन् । किनकि, पोषणका सिद्धान्त सबैमा समान रूपमा लागू हुँदैनन् । तर, यसमा केही अपवाद पनि छन् । यहाँ केही यस्ता पोषणसम्बन्धी तथ्य प्रस्तुत गरिनेछ, जसमा अधिकांश मानिस...
छ केही चिसो भगाउने अचुक औषधि ? के गर्ने ?
चिसोबाट प्रभावित भएपछि तत्काल उम्किनुपर्ने हुन्छ । चिसो लागेपछि तपाईंलाई आफ्नो दैनिकीलाई निरन्तरता दिन मुस्किल पर्छ । चिसोले समाति नै सक्यो भने तपाईंले अवश्य पनि केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । चिसोबाट छुटकारा पाउन केही उपाय अपनाउनुहोस्– १) प्रशस्त पानी...
बेसार के हो ? नेपाली भान्छामा सदियौँदेखि प्रयोग गरिँदै आएको बेसारलाई सुनको टुक्रा अर्थात् इन्डियन स्याफ्रोन पनि भनिन्छ । यो एसिया तथा सेन्ट्रल अमेरिकामा पाइन्छ । सुनौलो, चम्किलो, पहेँलो रङको प्रशोधित बेसार खानामा रङको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । भारतमा...
कण्डम प्रयोग गर्दा यी ९ गल्तीबाट बच्नुहोस्
मानिसहरु यौन सम्पर्कका बेला कण्डम प्रयोग गर्छन् । तर अधिकांश यसको सही प्रयोग जान्दैनन् । कण्डम प्रयोग गर्ने बेला धेरै खालका सावधानी पनि अपनाउनुपर्छ । १. खोल्ने तरिका: कण्डमको सही प्रयोगका लागि यसलाई सावधानीपूर्वक बाहिर निकाल्न प्याकेट पनि सही...
अनुसन्धानसिद्ध ७ अस्वस्थकर बानी : घाँटीमा बाँधिएको टाईले मस्तिष्कमा हानि !
१. टाउकोदुखाइ, दाँतको दुखाइ, मांसपेशीको दुखाइ तथा हाडजोर्नीको दुखाइको समयमा प्रयोग गरिने आइबुब्रुफिन औषधिको नियमित तथा अधिक प्रयोगले पुरुषमा बाँझोपनको समस्या निम्त्याउँछ । फ्रेन्च वैज्ञानिकले अध्ययनका क्रममा १८ देखि ३५ वर्ष उमेरसमूहका केही पुरुषलाई करिब दुई हप्तासम्म दिनको दुईपटक...
पुरुषभन्दा महिलामा फरक हुन्छन् हृदयाघातका लक्षण
लामो समयदेखि छातीको दुखाइ र श्वासप्रश्वासमा असहजता (अनियमितता) हृदयाघातका प्रमुख लक्षण हुन् भन्ने विश्वास गरिँदै आएको छ । यी लक्षणहरू वर्षौंदेखिको क्लिनिकल अनुसन्धानका क्रममा पुरुषले अनुभव गर्दै आएका लक्षणका आधारमा प्रमुख मानिँदै आएको छ । तर, पुरुषको तुलनामा हृदयाघातको...
रगतमा ग्लुकोज अर्थात् चिनीको मात्रा सामान्यभन्दा बढी भएको अवस्थालाई मधुमेह वा चिनीरोग भनिन्छ । विशेषगरी शरीरमा इन्सुलिन पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नभएमा, इन्सुलिनको कार्यक्षमतामा ह्रास आउनाले वा इन्सुलिनको उचित उपयोग नभएमा मधुमेह हुन सक्छ । यस प्रकारको मधुमेहलाई वंशानुगत कारण,...
जब तपाईं गर्भवती अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईंमा देखिने स्वास्थ्य समस्याले तपाईंको शरीरलाई मात्रअसर गर्दैन, तपाईं गर्भमा भएको बच्चालाई पनि असर गर्छ । यही वास्तविकताले गर्दा गर्भवती अवस्थामा जुनसुकै रोग लाग्दा पनि यसविरुद्ध लड्न अप्ठ्यारो हुन्छ । विगतमा (गर्भवती नहुँदा) जब...
सम्भव छ सफल बुढ्यौली ?
विज्ञानले क्षमतालाई लम्ब्याउने र बूढो हुनुका नकारात्मक असर घटाउनुलाई नै सफल बुढ्यौली मान्दछ । उमेर बढ्दै जाँदा मानिसको शारीरिक र मानसिक क्षमताहरू ह्रास हुँदै जान्छन्, यो प्राकृतिक हो र अवश्यम्भावी छ । तर, बुढ्यौलीसँगै आउने शारीरिक र मानसिक क्षमताको...
चिसोबाट मुक्ति पाउने घरेलु उपाय
तपाईं चिसोबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने औषधि खानुपूर्व दुईपटक सोच्नुहुनेछ । विशेषगरी एसियन मानिस, त्यसमा पनि भारतीय र नेपाली अझै पनि घरेलु विधिमा विश्वास गर्छन् । चिसो लाग्दैमा औषधि खाइहाल्नुभन्दा यी साइडइफेक्टमुक्त औषधि अथवा घरेलु विधि अपनाउन सक्नुहुनेछ...
चिसोमा ओफुरो : जापानमा घर–घर, नेपालमा रहर
जाडो मौसममा चिसोले सबैलाई सताउने गर्छ । पछिल्लो समय चिसो बढेसँगै ओफुरोथेरापीमा नेपालीहरूको आकर्षण बढिरहेको छ । स्पाथेरापी सर्भिसभित्रको यो सेवा जाडो मौसममा स्वास्थ्यका लागि अति नै उपयोगी मानिन्छ । चिसो भगाउन मात्र नभएर ओफुरो विशेषगरी सबैखाले नसर्ने रोगको...
जाडोको सुरुवातसँगै सूर्यको किरण शरीरमा कम पर्छ, जसले शरीरलाई चाहिने भिटामिन डीको कमी हुन्छ । त्यसको कमी पूरा गर्न जाडो मौसममा हाडलाई फाइदा पुर्याउने, रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने र प्रजनन क्षमता बढाउने च्याउलाई तरकारीका रूपमा रोज्न सक्नुहुन्छ । च्याउ उच्च...
अनिद्राले जंकफुडको मोह, जंकफुडले स्वास्थ्य स्वाहा
धेरै मानिसको अनुमानमा नहुन सक्छ, अपुरो निद्रा अधिक भोकसँग सम्बन्धित छ । हो, धेरै अध्ययनले प्रमाणित गरेका छन्, अपुरो निद्रा अधिक भोकसँग सम्बन्धित छ । खासगरी निद्रा नपुग्दा गुलियो र चिल्लो खाइरहन मन लाग्ने हुन्छ । किनकि, स्लिप डिसअर्डर...
सुन्तलाका स्वास्थ्य फाइदा
हामी सबैले सुन्ने गरेका छौँ– दिनमा एउटा स्याउ खानुहोस्, रोगबाट टाढै रहनुहोस् । तर, सुन्तालाबारे ? सुन्तलामा अत्यन्तै कम क्यालोरी हुन्छ तर पोषणले भरिपूर्ण हुन्छ । सुन्तलाको सेवनले स्वस्थ रहन सघाउँछ, छालालाई फाइदा पुर्याउँछ, र धेरै रोगबाट बचाउँछ ।...
कति खाने जाडोमा पानी ?
हामीमध्ये अधिकांशले गर्ने गरेको गुनासो हो, जाडोमा तिर्खा लाग्दैन, कति पानी खानुपर्ला ? हो, जाडोमा तपाईं तिर्खाको अनुभूति नगर्न सक्नुहुन्छ । तर, तिर्खा नलागे पनि तपाईंको शरीर सुक्खा हुन नदिन पानी बारम्बार पिउनु अति आवश्यक छ । पानी केका...
के चिसो लागेका वेला ‘कमनकोल्ड’मा व्यायाम गर्नु उपयुक्त छ ?
तपाईं नियमित व्यायाम गर्नुहुन्छ र कुनै वेला चिसो मौसममा रुघाखोकीले सताएको छ, त्यतिवेला पक्कै मनमा प्रश्न उठ्नेछ– व्यायामलाई निरन्तरता दिऊँ कि नदिऊँ ? मर्निङवाक, साल्सा डान्स, जिम, कार्डियो, जुम्बा, एरोबिकजस्ता व्यायामले दिने इनर्जीले तपाईंको दैनिकी सहज हुने भए पनि...
कफी एन्ड कोल्ड
के चिसो मौसममा तातो पेयपदार्थले शरीरमा हिट पैदा गर्छ ? हो, पेयपदार्थले सम्पूर्ण शरीरलाई ताप दिँदैन । तर, तातो पेयपदार्थले चिसो मौसममा शरीरलाई हाइड्रेड राख्न मद्दत पु¥याउँछ । तातो कफीले हात, पेट, मुखसम्म तताउँछ । चिसो मौसममा शरीर अत्यन्तै...
रोग होइन महिनावारी सुक्नु अर्थात् रजोनिवृत्ति
‘मेरो महिनावारी सुकेका (रजोनिवृत्ति) ३ वर्ष भयो । त्यसपछिका दिनमा मेरो शरीर तथा मनमा समस्या देखिएको छैन । मैले त यस अवस्थालाई सामान्यरुपमा लिएकी छु । म महिला समूहसँग पनि काम गर्छु, अहिलेसम्म महिलाको रजोनिवृत्तिमा समस्या पाएको छैन ।’...
न्याम्सका पूर्व उपकूलपति डा. मास्केको कोरोनाबाट निधन
चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षा फागुनमा, फारम भोलिबाट खुल्दै
भारतमा पहिलो दिन करिब २ लाखले लगाए कोरोना खोप, केहीमा सामान्य असर
प्रसुती अस्पतालमा ५ सय ९८ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव,बेड संख्या पनि थपिँदै
भारतमा कोरोनाविरुद्ध विश्वकै ठूलो खोप अभियान सुरु, ३ करोड स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याक्सिन
बिरामी पर्दै बालबालिका : चिसोबाट कसरी जोगाउने? डा. विच्छाको पाँच सुझाव
नेपालमा अनुमति पाएको ‘कोभिसिल्ड’ खोप कहिले आउँछ?